Madaxweyne Lafta Gareen oo amar siiyey laamaha amniga K/Galbeed | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweyne Lafta Gareen oo amar siiyey laamaha amniga K/Galbeed
Madaxweyne Lafta Gareen oo amar siiyey laamaha amniga K/Galbeed
Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta Gareen Madaxweynaha maamulka Koonfur GalbeedSoomaaliya ayaa ka hadlay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaannada maamulkaas oo ay Al-Shabaab ka geysteen degaano ka tirsan koonfur Galbeed.
Lafta Gareen ayaa sheegay in weerarada ka dhacay deegaannada Deeynuunaay & Goof-gaduud ay ay yihiin kuwo soo laab laabtay oo keeni kara culeys farabadan oo dhanka Amniga ah, isla markaana loo baahan yahay in tallaabo la qaado.
Sidoo kale Waxa uu faray Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed inay qaadaan tallaabooyin la xiriira dhanka Amniga iyo inay Al-Shabaab ka saaraan degaannada ay kaga sugan yihiin Koonfur Galbeed.
Hadalka Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kusoo aadayaa xilli laabdii todobaad ee la soo dhaafay weeraro ay mas’uuliyin k geeriyoodeen ay ka dhaceen degaano ka tirsan Gobolka Baay.
Maqaal horeMagaalada Duusamareeb magaca ma laga beddeli karaa?
Maqaal XigaWasiirka amniga HirShabelle oo war cusub ka soo saaray dilka wasiir Karaani